ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ နေရာအားလုံးတွင် ဝင်မပြိုင်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဆုံးဖြတ် - Yangon Media Group
၂ဝ၁၈ ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း နေရာစုံမပြိုင်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ မဝင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အစည်းအဝေးကို ဇူလိုင် ၄၊ ၅ ရက်တို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အထက်ပါအတိုင်းဆုံး ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ခိုင် ဖြိုးပါတီပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဇူလိုင်၅ ရက်က ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို သံသယရှိသဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကိုလုံးဝမဝင်ရန် ယခင်ကစဉ်းစားထားသော်လည်း ဒေသခံပါတီနှင့် ပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုမှုအရ နေရာအများစု၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ”တချို့နေရာတွေမှာ ပြည်သူလူထုက ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုဝင်စေချင်တယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဝင်ပြိုင်ခြင်းအားဖြင့် တစ်နေရာရရအားကိုး စရာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုတိုက်တွန်းတာလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသခံပါတီက ခေါင်း ဆောင်များ၊ ဒေသခံပြည်သူများရဲ့ ဆန္ဒအရ ကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ဝင်ပြိုင်မည့်နေရာအရေအတွက်ကို အတိအကျမထုတ်ပြန် နိုင်သေးသော်လည်း နေရာအများစု တွင်ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင်မူ ဝင်ပြိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောသည်။ ”တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တော့ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီ တွေကို ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ ချန်ထားမှာပါ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ မကြာခင်ထုတ်ပြန်ပေးပါမယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုလည်း စတင်ရွေးချယ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ကျင်းပမည့် ၁၃ နေရာစလုံးသည် ၂ဝ၁၅ အထွေ ထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုး ရှုံးနိမ့်ထားသည့်နေရာများဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ မဝင်ဆုံးဖြတ် ချက်ကြန့်ကြာနေခြင်းမှာ ယင်းအပေါ်တွင်စိုးရိမ်မှုကြောင့်မဟုတ် ကြောင်း ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားထားသည်။
အာဏာရပါတီဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် နေရာ ၁၃ နေရာစလုံး တွင်ဝင်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ပြိုင်မည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုလည်း ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ကြေညာထားသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ဒီချုပ်ပါတီမှ ကော်မရှင်ထံ ကိုယ်စားလှယ်သုံးဦး တင်ပြလျှောက်ထားကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောခွင့်ရ ဦးမြင့်နိုင်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲကို ကန်ပက်လက်၊ လဲချား၊ တာမွေနှင့် မြင်းခြံမြို့နယ်များတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်လေးနေရာ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်တစ်နေရာနှင့် မတူပီ၊ တမူး၊ ရသေ့တောင်၊ အုတ်တွင်း၊ သပိတ်ကျင်း၊ မင်းဘူးနှင့် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်တို့တွင် တိုင်း ဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် ခုနစ်နေရာနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလွှတ် တော်တစ်နေရာတို့တွင် ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်၌ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကြားဖြတ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က နေရာအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ဒုတိယနေရာအများဆုံး အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအတွက် ဗြိတိန်အစိုးရမှ လာမည့် ငါးနှစ်တာအတွက် ရန်ပုံငွေ ပေါင် ၉၇
ခရီးသည်တင်ယာဉ် တစ်စီး ဂုတ်တွင်း ငါးထပ်ကွေ့မှ သုံးထပ်ကွေ့သို့ ထိုးကျ၊ တစ်ဦးသေ၊ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာ
ဝင်းဂါးအတွက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားမည်ဟု အိုင်ဝိုဘီ ပြောကြား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ပုံတူ ဆီလီကွန်ရုပ်တု သန့်ရှင်းရေးပြုလု??
ဝေဖန်မှုများမှားယွင်းကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ဟု ကော်တွိုက်စ်ကြုံးဝါး ၊ နေမာကြောင့် ယခုထက်ပ?
ဘောလုံးရာသီကို အကောင်းဆုံး အဆုံးသတ်ရန် နည်းပြဆာရီတိုက်တွန်း၊ ဒူးဒဏ်ရာခွဲစိတ်မှုကြောင့် လက?
ချဲလ်ဆီးအသင်းမှ နည်းပြကွန်တီ ထုတ်ပယ်ခံရသောကြောင့် မကြာမီဆာရီကို ခန့်အပ်ဖွယ်ရှိ